IGolden Fold ayinawo umhla wokukhutshwa ngokusemthethweni | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Ngaphezulu kweeveki ezimbini ezidlulileyo kwaqinisekiswa ukuba ukumiliselwa kweGolden Fold yayi kumiswe elinye ixesha elingenammiselo. Isamsung iqinisekisile, emva iingxaki eziye zafunyanwa kwiscreen sefowuni. Ukulibaziseka ekuqalisweni kwefowuni inikwe njengethuba lenkampani, ukuze babenakho tshintsha ezinye izinto kwifowuni. Kodwa kubonakala ngathi bazakuthatha ithutyana.
Kuqala kwathiwa le Galaxy Fold iya kulibaziseka iiveki ezimbalwa. Kodwa i-Samsung ikuqinisekisile oko ifowuni ayinawo umhla wokukhutshwa, okwangoku. Kungathatha ixesha elide kunokuba bekulindelwe ukufikelela ezivenkileni. Into edala inkxalabo.
Ukongeza, inkampani ibikhe nasezindabeni ngendlela engeyiyo. Ukusukela iwebhusayithi eyaziwayo ye-iFixit ilayishe ividiyo ekucaciswe ukuba yintoni ingangunobangela Iingxaki zescreen seGreen Fold. Uhlalutyo lokuba uphawu lwaseKorea wanyanzela iwebhu ukuba irhoxe Kamva, isigqibo esivelise impikiswano.
Isamsung ngoku isebenza kwisisombululo kwezi ngxaki ngesixhobo. Kwangelo xesha, kukho abasebenzisi abangakhange bonwabe kwaye bafuna ukurhoxisa ukubhukisha kwabo. Esi sixhobo besiphumelela ngokubhukisha, phambi kwezi ngxaki. Kodwa inkampani iyangqina ukuba abo bangafuni kugcina ukubhukisha baya kubuyiselwa imali yabo.
Abo bavakalisa ngokucacileyo umnqweno wabo wokugcina ugcino baya kulugcina. Kodwa baya kulinda ixesha elide de ikhutshwe ngokusemthethweni iGolden Fold. Njengoko akukho mhla wokukhutshwa ubonwayo, okwangoku. Asazi ukuba kuya kuthatha ixesha elingakanani ukuba inkampani isombulule ukusilela.
Ke kuya kufuneka linda ubone ukuba kwenzeka ntoni kolu khululo. Inkxalabo iyenyuka eSamsung, kufanelekile, njengoko isoyikisa isikhundla sayo njengophawu lwentengiso, esetelwe ukulawula eli candelo leefowuni ezisongekayo ngeGold Fold yayo. Siza kulilandela kakuhle eli bali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » IGolden Fold ayinawo umhla wokukhutshwa ngokweSamsung